မြန်မာ အိုင်ဒေါလ်ပြိုင်ပွဲ မှာ ဒိုင် လူကြီး (၃) ယောက် က လူပိုတွေ ဖြစ်နေပြီ လား ? – Shwewiki.com
မြန်မာ အိုင်ဒေါလ်ပြိုင်ပွဲ မှာ ဒိုင် လူကြီး (၃) ယောက် က လူပိုတွေ ဖြစ်နေပြီ လား ?
အ သက်ရှူရပ်မတတ်ရင်ခုန်ရသော မြန်မာအိုင်ဒေါရဲ့Result show ကတော့ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်များရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေဟာလည်း အံ့မခန်းဖြစ်ခဲ့ပြီး Final ကို ပြိုင်ပွဲဝင်အကုန်လုံးကို ခေါ်ယူသွားချင်လောက်အောင်ဖြစ်စေပါတယ်။
မြန်မာ အိုင်ဒေါကိုနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာခဲ့ရသူနှစ်ဦးကတော့ Wild Card နဲ့ပြန်လည်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ တန်ခွန်ကျော် နဲ့ Mooler တို့ဖြစ်ပါတယ်။Final မှာ Winner ဖြစ်ဖို့အတွက်အကြိတ်အနယ်ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ရမယ့်သူ(၃)ဦးကတော့ ဘင်ဂျမင်ဆုမ်း၊အေးမြဖြူနဲ့အက်စတာဒေါ့ချင်းဆုန်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အ လှပြင်ပစ္စည်းရောင်း တဲ့ဆိုင် ထဲဝင်သွား တဲ့ မိန်းမ ကို အိပ်ပြီးစောင့်ရ မယ် ဆိုပြီး စနောက်ခဲ့တဲ့ ရွှေထူး
အဖေ့ လုပ် ရပ် ကို မုန်းပြီး အငြိုး အတေး ထား ခဲ့ တဲ့ အကြောင်း ရင်ဖွင့် လိုက် တဲ့ နွေးနွေး ချစ်ဖွယ်